တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: How to Fix IDM fake serial number Error ( IDM fake serial number ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း - ဆော့ဝဲ မလို )
How to Fix IDM fake serial number Error ( IDM fake serial number ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း - ဆော့ဝဲ မလို )
ခုနောက်ပိုင်း IDM မှာ Internet Download Manager has been registered withafake Serial Number ဆိုပြီး Warning ခဏခဏ တက်ပါတယ်. ဘာ Patch နဲ့ပဲလုပ်လုပ် . ခဏပါပဲ. ပြန်တက်တက်လာတယ်..
ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ နည်းကို မိတ်ဆွေကို ပြောပြပါမယ်..
1. Desktop ပေါ်က IDM Icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
2. အဲဒီထဲက IDMGrHlp.exe ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ..
ဒါဆို အဆင်ပြေပါပြီ.. Windows တက်ခါစမှာတော့ IDM Cannot find 1 file(s) that are necessary for browser and system intergration. Please reinstall IDM. ဆိုပြီး တက်လာပါတယ်.. ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ.. စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ သုံးလို့ရပါပြီ..
To Disable IDM Fake Serial Number Error :
1. Right Click on IDM Icon in Desktop and choose Open File Location.
2. Delete IDMGrHlp.exe.
.. Close if '' IDM Cannot find 1 file(s) that are necessary for browser and system intergration. Please reinstall IDM '' warning.
Be OK !..